Ento mankany amin'ny kapila ivelany ny tranomboky iTunes. Vaovao IPhone
Manana ny tranombokin'i iTunes miasa tsara ary mandany fotoana. Ny mozika rehetra, ny sarimihetsika, ny andian-tsarimihetsika ary ny fampiharana anay, miaraka amin'ny fonony, vaovao sns. harena tsy maintsy karakaraina. Noho io antony io dia tsy maharary mihitsy ny mahafantatra ny fomba hitondrana izany famakiam-boky izany amin'ny toeran-kafa, toy ny kapila mafy ivelany, na fahatsiarovan-tselatra, na hahafahana mankafy azy amin'ny fitaovana hafa na mamorona backup, tsy fantatrao mihitsy inona no mety hitranga amin'ny kapila mangirana ao amin'ny solosaintsika. Tena mora tokoa ny manondrana ny mombamomba antsika rehetra amin'ny toerana hafa, ary manamboatra iTunes mihitsy aza ka manomboka amin'io fotoana io dia miasa miaraka amin'io toerana vaovao io. Manazava izany tsikelikely izahay
1 Alefaso any amin'ny tahiry ivelany ny tranombokinay manontolo
2 Ovao ny toerana misy ny tranomboky ho amin'ny làlana vaovao
Alefaso any amin'ny tahiry ivelany ny tranombokinay manontolo
Ity toerana ity dia matetika amin'ny làlana manaraka:
Mac: / Users / (anaranao) / Mozika / iTunes
Ao anatin'io lalana io no ahitantsika ny folder «iTunes Media»Izay ilay misy ny fitehirizam-bokintsika manontolo. Tsy mila mandika sy mametaka azy amin'ny toerana tiantsika hitahiry azy fotsiny isika fa efa manana kopia iray manontolo.
Ovao ny toerana misy ny tranomboky ho amin'ny làlana vaovao
Angamba ianao nanao ny kopia hampiasa azy io amin'ny solosaina hafa, na manana kopia nomaniny ho solon'izay. Mety nanapa-kevitra ihany koa ianao ny hamindra ny tranomboky amin'ny toerana hafa satria mandany toerana be loatra amin'ny solosainao izany. Afaka mora foana ianao amboary ny iTunes mba hampiasa io toerana vaovao io amin'ny fomba tena tsotra. Midira amin'ny safidin'ny programa, ary ao amin'ny kiheba "Advanced", kitiho ny "Change", safidio ny toerana vaovao misy ny fitehirizam-boky ary ekenao. Manomboka eo, iTunes dia hiasa amin'ny fampiasana io lalana vaovao io.
Fanazavana fanampiny - Misy fanavaozana vaovao amin'ny iTunes 11.1.1 izao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ento mankany amin'ny kapila ivelany ny tranombokinao iTunes
Salama. Manana ny famakiam-boky iTunes amin'ny PC aho, saingy tiako ny mamindra azy amin'ny DD ivelany, fa tsy ny folder iTunesMedia, izay efa ananako, fa ny fitehirizam-boky kosa mitazona ny isan'ny fanaingoana, naoty sns.
Ahoana no hataoko.
Manana Windows 7 sy iTunes 12 aho